ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲ Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလားတူရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြထားသည် အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်စဉ်ကို, အ အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂေဟစနစ်, အ အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမြင့်တက် နှင့်ပင်တစ်ခု infographic အထွက်စျေးကွက်၏ပေါက်ကွဲတိုးတက်မှုနှုန်း.
၀ င်ထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများမှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်းကိုအဓိကအာရုံစိုက်သော်လည်း၎င်းသည် Pixaal မှအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်အချက်အလက်ကောင်းကောင်းရရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ Call-To-Action ဒီဇိုင်း၊ ဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူထုဆက်ဆံရေးကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအလိုအလျောက်နှင့် whitepapers, ebooks, case study နှင့်အခြားအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများ။ (ဖြစ်ချင်တော့) infographics ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာ၊ တွင်းထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဟာဗျူဟာနှင့်ဗွီဒီယိုမဟာဗျူဟာများပါ ၀ င်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ရန် Ashdown Group သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးထားသည်။
လူအများစု၏ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမကြာခဏဆိုသလို Search Engine Optimization (SEO) နှင့် Pay Per Click Advertising (PPC) ကိုသာအဓိကထားလေ့ရှိသည်။ ဤအချက်သည်မှန်သော်လည်းလက်တွေ့တွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။
Tags: 404 စာမကျြနှာblog မှတ်ချက်များအကြောင်းအရာ Curationအကြောင်းအရာစျေးကွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်တင်သွင်းမှုပြင်ပ seoheader tagsimage ကို optimizationဘက်ကလင့်များပြည်တွင်း seoသော့ချက်စာလုံးတွေစာမျက်နှာ optimizationကဗျာrobots.txtရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationဒီမှာseoမြေပုံအညွှန်းလူမှုရေး bookmarkingလူမှုမီဒီယာခေါင်းစဉ် tags များurlက်ဘ်ဆိုက်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲ
မေလ 30, 2013 မှာ 4: 40 pm တွင်
ကြီးကျယ်တဲ့အချက်အလက်။ ငါထင်တာကပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းက“ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ထင်လို့ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေရာပဲ။
မေလ 30, 2013 မှာ 4: 59 pm တွင်
ဂရိတ်အမှတ်! ရေဒီယို၊ တီဗီနှင့်သတင်းစာများသည်ပင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်သည်။
ဇွန် 2, 2013 မှာ 10: 39 pm တွင်
ဤသည် Pixaal အလုပ်၏မိတ္တူပါ! ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပါသို့မဟုတ်မူရင်းကိုဂုဏ်ပြုပါ။ မူရင်းကိုကြည့်ပါ http://www.pixaal.com/scoops/what-is-digital-marketing-infographic/ or http://visual.ly/digital-marketing.
ဇွန် 2, 2013 မှာ 11: 10 pm တွင်
နောက်ဆုံးပေါ် @pixaal: disqus! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ကျွန်ုပ်တို့သည်ချေးငွေကိုဘယ်ကပေးရမည်နည်း
မေလ 26, 2015 မှာ 5: 35 AM
ဧပြီ 10, 2016 မှာ 12: 10 pm တွင်
အလွန်ကောင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပါတကား! ဒီ blog post ယောက်ျားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလဲဆိုတာဖောက်သည်များကိုပြရန်၎င်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်